Ikhaya » Iindaba zeShishini lokuhlangana » I-IMEX isungula iintsuku ezimbini zonxibelelwano kwiqonga leBuzzHub
I-IMEX izisa uluntu kunye
Ukudala unxibelelwano-ngakumbi iibhloko zokwakha kwiNdlela eya eMandalay Bay kwi-IMEX America.
Kuya kubakho iintsuku ezi-2 ezinikezelweyo ezenzeka kwiqonga elitsha lamava eBuzzHub.
Ezi ntsuku zijolise kwintlanganiso ziyilelwe ukwakha ubudlelwane kunye nobudlelwane ngexesha apho icandelo kufuneka lihlangane kunye nokwakha ngcono.
Iqonga le-IMEX BuzzHub liqhuba de kube ngu-Septemba ehambisa unxibelelwano lomntu, ixabiso leshishini kunye nomxholo ofanelekileyo.
"Siyile sayila iBuzzHub yethu ukuzisa ishishini kunye noluntu lwethu ngokudibeneyo kwi-intanethi ukuya kumdlalo olandelayo wobuntu, IMEX America ngo-Novemba. Sizimisele ukunikezela ngeentsuku ezimbini ezintsha kunye neenoveli zenethiwekhi kwi-IMEX BuzzHub yethu kwaye ziya kuhamba macala omabini oSuku lweBuzz ngoLwesithathu olandelayo, nge-9 kaJuni. ” UCarina Bauer, i-CEO yeQela le-IMEX, wazisa iintsuku ezimbini zokunxibelelana ezinikezelweyo ezenzeka kwiqonga lamava elitsha, iBuzzHub.
Unxibelelwano kunye neentsuku ezijolise kwiintlanganiso ezikwi-Intanethi zenzeka ngolwe-Lwesibini, nge-8 kaJuni nangoLwesine, nge-10 kaJuni, nokuba leliphi icala le-Buzz Day nge-9 kaJuni, kwaye ziyilelwe ukwakha ubudlelwane kunye nobudlelwane ngexesha apho icandelo kufuneka lihlangane kwaye yakha umva ngcono. Kuyinyani Uhlobo lwe-IMEX, idosi enkulu yokwenza ubuqu ilukelwe yonke imihla ngeqonga le-AI elinikwe amandla livumela abantu ukuba banxibelelane ngokusekwe kuluhlu lweenqobo zobuqu kunye nezobuchwephesha. Oku kwenza unxibelelwano olunentsingiselo okanye olusesikweni lweshishini ngokusekwe kwimidla ekwabelwana ngayo ukusuka emsebenzini, izilwanyana, ubugcisa, igadi kunye nokudlala.
Ngelixa iqonga livumela unxibelelwano kunye nonxibelelwano ukuba lwenzeke nangaliphi na ixesha, kuphela ngamaxesha athile kunye neentsuku apho abathathi-nxaxheba banokucwangcisa iintlanganiso zevidiyo okanye zeaudiyo eqongeni.
UCarina uqhubeke wathi: “Siyathemba ukuba 'iiBuzzHubbers' zethu zizakusebenzisa ezi ntsuku zonxibelelwano ukuphinda zinxibelelane nabantu abangasakwaziyo ukunxibelelana nabo kula maxesha akutshanje, anzima kunye nokwazi ubuso obutsha kumzi mveliso wethu.
I-Seychelles ishiya ushicilelo lwendalo olu Suku lweNdalo esingqongileyo kwi-Global Impact Network